မာရာဒိုနာ နဲ့ မက်ဆီ . . . ဘောလုံးစွမ်းရည်ပိုင်းမှာ ဘယ်သူပိုသာလဲ ? - SPORTS MYANMAR
မာရာဒိုနာ နဲ့ မက်ဆီ . . . ဘောလုံးစွမ်းရည်ပိုင်းမှာ ဘယ်သူပိုသာလဲ ?
ဘယ်သူ က ဘောလုံး သမိုင်း တစ်လျောက် အကောင်းဆုံးလဲ ? မက်ဆီ နဲ့ ရိုနယ်ဒို တို့ နှစ်ဦးပေါင်း ရွှေဘောလုံး ဆု ကို ၁၁ ကြိမ် ပိုင်ဆိုင် ထားကြ ပါတယ် ။ဒါကြောင့် ပရိသတ် အတော်များများ က သူတို့ ၂ ယောက် ထဲ က တစ်ယောက်ကို ပဲ ရွေးချယ် ကြပါတယ် ။ ရိုနယ်ဒို က ကလပ်အသင်းတွေပြောင်းပြီးအောင်မြင်မှု၊နိုင်ငံအသင်းနဲ့ အောင်မြင်မှု ရှိခဲ့သလို မက်ဆီ ကလည်း ရွှေဘောလုံးဆု မှာ ၆-၅ နဲ့ အသာ ရရှိ ထားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် သူတို့ ကို နံပါတ် ၁ မထားလိုတဲ့ သူတွေ လည်း ရှိကြ ပါတယ် ။ မက်ဆီ ဆိုရင် ပြည်တွင်း မှာပါ မာရာဒိုနာ နဲ့ နှိုင်းယှဉ် ပြောဆို ခံ နေခဲ့ရ တာပါ ။ ၁၉၈၆ ကမ္ဘာ့ ဖလား ကို အရယူ ပေးခဲ့တဲ့ ဂရိတ် ကစား သမားကြီး မာရာဒိုနာ ကို သမိုင်း တစ်လျောက် အကောင်းဆုံး လို့ သတ်မှတ် ထားသူတွေ ရှိခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် သူတို့ ၂ ယောက် ကို အောင်မြင်မှုတွေ နှိုင်းယှဉ် မကြည့်တော့ဘဲ ဘောလုံး အရည် အသွေး နဲ့ နှိုင်းယှဉ် ဆုံးဖြတ် ကြည့်ကြရ အောင် . . .
ဒီအတွက် အကောင်းဆုံး လုပ်ပေးနိုင်တာ ကတော့ဖီဖာဂိမ်းကအချက်အလက်တွေ နဲ့ နှိုင်းယှဉ် ကြည့်တာ ပါပဲ ။ FIFA ဘောလုံး ဂိမ်း ဟာ ကစား သမားတွေ ရဲ့ ပြင်ပ ကစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ထပ်တူနီးပါးတူညီတဲ့အချက်အလက်တွေကိုထည့်သွင်းထားတာ ကြောင့် တစ်ဦး နဲ့ တစ်ဦး နှိုင်းယှဉ် ရာမှာ အကောင်းဆုံး ကူညီ ပေးနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။
မကြာသေးမီ က ရိုနယ်ဒို ၂ ဦး ( ခရစ္စတီယာနို နဲ့ ဘရာဇီး ရိုနယ်ဒို ) တို့ ကို ဖီဖာ ဂိမ်း အချက် အလက်တွေ အသုံးပြု နှိုင်းယှဉ် ကြည့်ရမှာတော့ ပေါ်တူဂီသားကြီး ဟာ မူလလက်ဟောင်း ရိုနယ်ဒို ထက် ပိုမို စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းမွန် တာကို တွေ့ရှိ ခဲ့ရ ပါတယ် ။
အခု မက်ဆီ နဲ့ မာရာဒိုနာ တို့ ကို နှိုင်းယှဉ် ကြည့်ကြရအောင် . . . .
၁ ။ မြန်နှုန်း ကဏ္ဍ မှာတော့ မာရာဒိုနာ နဲ့ မက်ဆီ တို့ ၉၁ မှတ်စီ နဲ့ သရေကျ နေခဲ့ကြပါတယ် ။
၂ ။ တာတို ပြေးတဲ့ မြန်နှုန်း မှာတော့ မာရာဒိုနာ က ၈၅ ရှိပြီး မက်ဆီ က ၈၄ ရှိခဲ့ပါတယ် ။ ဒီယေဂို က နှာတဖျား သာသွားခဲ့ တာပါ ။
၃ ။ နေရာယူမှု အပိုင်း မှာတော့ မက်ဆီ က ပိုမို သာလွန် ခဲ့ပြီး ၉၄ မှတ်ထိ ရခဲ့ ပါတယ် ။ မာရာဒိုနာ ကတော့ ၉၂ မှတ်သာ ရခဲ့တာပါ ။
၄ ။ အဆုံးသတ်စွမ်းရည်မှာလည်း မက်ဆီ က ၉၅ မှတ် နဲ့ မာရာဒိုနာ ( ၉၄ ) ကို နှာတဖျား သာသွားခဲ့ ပါတယ် ။
၅ ။ ကန်ချက်ပြင်းအား ( shot power ) မှာ မက်ဆီ က ၈၆ ရှိပြီး မာရာဒိုနာ က ၈၃ ရှိခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီတစ်ခါ လည်း မက်ဆီ ပဲ အပြတ်အသတ် အသာရသွားခဲ့ တာပါ ။
၆ ။ အဝေးကန်ချက် အပိုင်း မှာလည်း မက်ဆီ က ၉၄ ရှိပြီး မာရာဒိုနာ က ၉၁ သာ ရှိခဲ့ ပါတယ် ။ မက်ဆီ က အဝေးကန်ချက် သိပ်မသုံးဘူးထင်ရပေမယ့် မာရာဒိုနာ နဲ့ ယှဉ်ရင်တော့ အပြတ်အသတ် သာနေခဲ့ပါတယ် ။
7 ။ မြေမကျကန်သွင်းမှု စွမ်းရည် ကလည်း ရှေ့တန်းလူတွေ အတွက် အရေးကြီးခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီနေရာမှာလည်း မက်ဆီ က မာရာဒိုနာ ထက် ပိုသာနေခဲ့ ပါတယ် ( ၈၈ နှင့် ၈၆ ) ။
၈ ။ ပင်နယ်တီ ကတော့မက်ဆီရဲ့အားနည်းချက်ဆိုတာအားလုံးသဘောပေါက်ထား ပြီးမှာပါ ။ မာရာဒိုနာ က ၉၂ ရှိပြီး မက်ဆီ က 75 ရှိပါတယ် ။ ဂိမ်းထဲမှာဘာစီလိုနာ ပင်နယ်တီ ရပြီး မက်ဆီ ကန်သွင်းရင် ၄ လုံးမှာ ၁ လုံးတော့ လွဲနိုင်တဲ့ သဘောပါ ။
၉ ။ ဘောလုံးအမြင် ၊ ဒီ အပိုင်းမှာ မက်ဆီ က ထူးချွန်တယ်လို့ အားလုံးထင်မှတ် ကြမှာပါ ။ vision 94 အထိ ရှိပါတယ် ။ လက်ရှိ ခေတ်မှာတော့ဟုတ်ချင်ဟုတ်မှာပါ ။ ဒါပေမယ့် မာရာဒိုနာ ရဲ့ ၉၅ ကိုတော့ ကပ်ပြီး ရှုံးခဲ့ပါတယ် ။
၁၀ ။ ဖြတ်တင်ဘောစွမ်းရည် ကတော့ နှစ်ယောက်စလုံး ထိပ်တန်း အဆင့်မှာရှိနေ ပါတယ် ။ ဒီနေရာမှာ နားလည်ထားဖို့ လိုတာက ဖြတ်တင်ဘော ( crossing ) ဆိုတာ ဘက်ခမ်းတို့လို ဝေ့ဝိုက်ပြီး တောင်ပံကနေကန်တင်ပေးမှဖြတ်တင်ဘောလို့ သတ်မှတ်တာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာပါပဲ ။ မက်ဆီ က ၉၄ ရှိပြီး မာရာဒိုနာ က ၉၃ ရှိပါတယ် ။
၁၁ ။ ဖရီးကစ် အရည်အသွေး မှာတော့ မက်ဆီ က မာရာဒိုနာ ကို နှာတဖျားသာ သွားခဲ့ ပါတယ်။မက်ဆီကိုဖရီးကစ်ပိုကောင်းအောင်မာရာဒိုနာကသင်ပြပေးခဲ့တာပါ ။ အခုတော့ မက်ဆီ ( ၉၄ ) က ဆရာ ဖြစ်သူ မာရာဒိုနာ (၉၃)ကိုကျော်တက်သွားခဲ့ ပါပြီ ။
၁၂ ။ အတိုပေး နိုင်စွမ်းမှာတော့ မက်ဆီ က သာလွန် ကောင်းမွန် ခဲ့ ပါတယ် ။ အတိုပေး စွမ်းရည် ၉၂ မှတ်ထိ ရှိခဲ့ပြီး မာရာဒိုနာ ကတော့ ၉၀ မှတ်သာ ရရှိခဲ့ ပါတယ် ။
၁၃ ။ အဝေးပေး မှုမှာလည်း မက်ဆီ ကပဲ ၉၂ မှတ် နဲ့ မာရာဒိုနာ ရဲ့ 87 ကို အပြတ်အသတ် အသာရရှိခဲ့ ပါတယ် ။
၁၄ ။ ဘောလုံးကွေးညွှတ်မှု ၊ ဒီအပိုင်းမှာ မာရာဒိုနာ က ၉၄ မှတ် နဲ့ မက်ဆီ ရဲ့ ၉၃ မှတ်ကို ကပ်ပြီး အသာရသွားခဲ့ ပါတယ် ။
၁၅ ။ လျှင်မြန်မှု အပိုင်းမှာ မာရာဒိုနာ က မက်ဆီ ကို မယှဉ်နိုင်ခဲ့ ပါဘူး ။ ၈၉ မှတ် ဆိုတာ တကယ်ကောင်းတဲ့ လျှင်မြန်မှု ဖြစ်ပေမယ့် မက်ဆီ ရဲ့ ၉၃ အတွက်တော့ လိုအပ်ချက် ရှိနေပါသေးတယ် ။
၁၆ ။ ဟန်ချက်ညီမှု ၊ အရပ်ပုတဲ့ ကစားသမားတွေဟာ ပိုပြီး ဟန်ချက် ညီတယ်လို့ ဆိုသလိုပဲ ၂ ယောက်စလုံး ရဲ့ balance ဟာ ထိပ်တန်း အဆင့်မှာ ရှိနေပါတယ် ။ မာရာဒိုနာ က ၉၈ ရှိပြီး စွမ်းရည်ပြည့် ဖြစ်ဖို့ ၁ မှတ်သာ လိုခဲ့ ပါတယ် ။ မက်ဆီ ကလည်း ၉၅ မှတ် ရထားပြီး ဟန်ချက် ပိုင်းမှာ ထိပ်တန်းဆင့် ထက် သာလွန်သူ ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့ ပါတယ် ။
တုန့်ပြန်မှု ၊ ဘောလုံး ထိန်းသိမ်းမှု ၊ လိမ်ခေါက်မှု ၊ လှုံ့ဆော်နိုင်မှု ၊ ခံစစ် သတိရှိမှု အပိုင်းတွေမှာ မက်ဆီ က သာလွန် ခဲ့ပြီး မာရာဒိုနာ ကတော့ ဖြတ်တောက် လုယူမှု ၊ လျောထိုးဖျက်ထုတ်မှု ၊ ပြေးပြီး ဖျက်ထုတ်နိုင်မှု ၊ ခွန်အားနဲ့ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ကစား နိုင်မှုတွေ မှာ မာရာဒိုနာ က သာလွန်ခဲ့ ပါတယ် ။
၂ ဦး စလုံး သက်လုံပိုင်းမှာ ၇၅ မှတ်စီ နဲ့ သရေကျ နေခဲ့ကြပြီး ခုန်အား ကဏ္ဍ မှာ မာရာဒိုနာ က သာလွန် ပေမယ့် ခေါင်းတိုက်မှု တိကျတဲ့ အပိုင်းမှာတော့ မက်ဆီ က သာလွန် ခဲ့ ပါတယ် ။ ၂ ဦး စလုံး ဟာ ခေါင်းတိုက်လေ့ သိပ် မရှိတာကြောင့် ဒီ အပိုင်းတွေ မှာ အမှတ်တွေ မကောင်းခဲ့ကြပါဘူး ။
အဆုံးသတ်လိုက်ချိန် မှာတော့ မက်ဆီ က ကဏ္ဍ 17 ခုမှာ အသာရခဲ့ပြီး မာရာဒိုနာ က ကဏ္ဍ ၁၂ ခုမှာ အသာရခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီလို နှိုင်းယှဉ် ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါ မှာတော့ ဘယ်သူက ပိုကောင်းတဲ့ ကစား သမားလဲ ဆိုတာ အဖြေ ထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။
အဖြေ ကတော့ မက်ဆီ ပါပဲ . . . . .
ချယ်လ်ဆီး ကြယ်ပွင့် တဦးကြောင့် မန်ယူနိုက်တက် ရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှု ကို ငြင်းပယ်ခဲ့ကြောင်း ပြန်လည် ဖွင့်ဟလာတဲ့ #အက်ဆီယန်
ဆိုးလ်ရှားရဲ့ မှန်ကန်နေခဲ့တဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ ပေါ်လစီ အကြောင်းကို ဒန်နီယယ် ဂျိမ်းစ် နဲ့ ဥပမာပေး ရှင်းပြလိုက်တဲ့ #ရိုင်ယန်ဂစ်